एकै मानिसका १३ श्रीमती, ती पनि एकैसाथ गर्भवती ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/एकै मानिसका १३ श्रीमती, ती पनि एकैसाथ गर्भवती !
कुनै पनि मानिसको श्रीमती कति जना होलान् । अवश्य पनि एक जना । किनकी कुनै मानिस बरु पटक पटक धेरैसंग प्रेममा पर्न सक्छ । तर जीवन काट्ने साथी अर्थात श्रीमती भने एक मात्र हुन्छन् ।आक्कल झुक्कल कसै कसैको दुई जनासम्म श्रीमती हुनसक्छन् । तर कोहि मानिसको १३ जना श्रीमती हुनसक्छ ? मान्नुहोस् १३ जना श्रीमती होलान् पनि तर के १३ जना श्रीमती एकैसाथ गर्भवती हुन सक्लान् ?